Caawin xaga sharciga ah ma ubaahantahay? UDI, Barnevern ama Nav. - NorSom News
Caawin xaga sharciga ah ma ubaahantahay? UDI, Barnevern ama Nav.
Ma isweydiineysaa Su aal la xiriirta sharciga/qanuunka Norway, arin aad fahmi weyday ama xalin weyday makaala dhaxeysaa hey´addaha dowlada, gaar ahaan NAV, UDI, Barnevern-ka ama khilaaf dhanka sharciga ah makaala dhaxeeyaa goobtaada shaqada?
Shirkada qareemada Clemetsen & Mohamed AS waxey ogeysiineysaa soomaalida reer Norway, inay diyaariyeen adeeg qareemeed oo ay weheliso turjumaano soomaali ah oo aqoon durugsan u leh afka soomaaliga, Norwiijiga iyo fahanka sharciga.
Waxaan leenahay khibrad-shaqo oo isku dar gaareyso 20 sano.
Waxaan horey ula soo shaqeyney dad badan oo soomaali ah, fahan iyo aqoon fiicana waan u leenahay dhaqanka iyo habfikirka bulshada soomaalida ah.
Waxaan aqoon gaar ah u leenahay kiisaska la xiriira UDI, Barnevernka ama NAV.
Waxaan ku siineynaa saacado bilaash ah oo talo bixin xaga sharciga ah.
Waxaa noo shaqeeyo turjumaano soomaali ah oo fast ah.
Hadii dhakhligaagu uu yaryahay, inta badan waxaa lacagta qareenka bixiyo dowlada. Laakiin waa inaan marka hore kiiskaaga dib u eegno oo aan furno.
Waxbo ha sugin inta uu kiiskaaga meel dheer gaarayo ee hada nala soo xiriir:
TLF. 22 42 98 00 ama post@clemo.no
booqo bogeena af-soomaaliga ku qoran ee Clemo.no